WARBIXIN: Abaal Marinta Goal 50 Oo Maanta La Bixinayo, Shan Xidig Oo Magac Wayn Oo Ku Fashilmay In Ay Liiskan Ku Soo Baxaan, Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Oo Markale Xifiltamaya Iyo Xidigaha Goolasha Ugu Badan Soo Dhaliyay Sanadkan 2017 – WWW.Gool24.net
WARBIXIN: Abaal Marinta Goal 50 Oo Maanta La Bixinayo, Shan Xidig Oo Magac Wayn Oo Ku Fashilmay In Ay Liiskan Ku Soo Baxaan, Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Oo Markale Xifiltamaya Iyo Xidigaha Goolasha Ugu Badan Soo Dhaliyay Sanadkan 2017
Shabakada Caalamiga ah ee Goal.com ayaa sanad kasta waxay si joogto ah u bixisaa abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican waxayna sidoo kale qiimayn buuxda ku sameeyaan 50 ciyaartoy ee aduunka ugu fiican iyada tan iyo sanadkii 2008 kii la bixinayay abaal marinta Goal 50 ee xidiga aduunka ugu fiican, waxaana si joogto ah tan iyo markaas loo soo saariyay qiimaynta 50 ciyaartoy ee ugu fiican sanadka la joogo laakiin ciyaartoy badan oo liisakn ku soo baxayay ayaa hadba laga dhex waayay.
Laakiin Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa ahaa labada xidig ee tan iyo sanadkii 2008 kii sida joogtada ah ugu soo baxay abaal marinta Goal 50 waana labada xidig ee tirada ugu badan dhexdooda abaal marintan ugu soo guulaystay. Haddaba barri oo talaado ah waxaa lagu dhawaaqi doonaa liiska 50 ka ciyaartoy ee aduunka ugu fiican sanadkan 2017 iyada oo waliba la ogaan doono xidiga ku guulaysan doona abaal marinta Goal 50.
Markasta oo loo tartamayo abaal marin shaqsi ah tan iyo wixii ka danbeeyay sanadkii 2008 kii waxaa kubbada cagta aduunka soo qabsaday Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo si toos ah ugu soo dagaalamayay abaa marin kasta oo shaqsi ah, waxaana markale suurtogal ah oo la filayaa in ay wali sii wadan doonaan in dagaalka ugu wayn ee abaal marinaha shaqsiga ahi uu labadooda dhex yaalo.
Laakiin sanadkan 2017 waxaa jiray ciyaartoy badan oo bandhig fiican sameeyay balse waxaa la ogaan doonaa haddii bandhigoodu uu sabab unoqon karo in ay Ronaldo iyo Messi kula tartamaan abaal marinaha shaqsiga ah ee la bixin doono.
Haddaba shabakada Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa xog muhiim ah oo ay tahay inaad ka ogaato abaal marinta barri la bixin doono ee Goal 50, sida loo bixiyo, cida codbixinta iyo qiimaynta ciyaartoydan ku samaysa iyo waliba ciyaartoydii abaal marintan ku soo guulaysatay intii la bixinayay.
Aan ku horaynee, shabakada goal.com ayaa aas aastay abaal marinta Goal 50, waxaana sanad kasta lagu aqoonsadaa 50 ka ciyaartoy ee kubbada cagta aduunka ugu fiican waxaana u codeeya tafatirayaasha 37 qaybood oo ay shabakada Goal.com ka kooban tahay oo ah luuqadaha kala duwan ee shabakadu ay ku baxdo.
Waxaa ciyaartoyda lagu qiimeeyaa heerka joogtaynta qaab ciyaareedkooda ee sanadkan oo dhan iyada oo 12 kii biloodba hal mar qiimayntan iyo codbixintan la sameeyo waxayna 37 ka qaybood ee ay Goal.com ka kooban tahay ku kala yaalaan dacalada aduunka taas oo keenaysa in aduunka oo dhan codbixintan lagu saleeyo.
Waxa kale oo ciyaartoyda lagu qiimeeyaa bandhiga ay sameeyaan kulamada waa wayn ee heerka kooxeed iyo heerka caalami labadaba iyada oo waliba si wayn loo tixgaliyo guulaha ay ku hogaamiyaan kooxaha ay ka tirsan yihiin xulalka qaramadooda.
Intaas haddii aan ku soo dhaafno hordhaca abaal marinta Goal 50, aan soo qaadano waqtiga liiska 50 ka ciyaartoy ee aduunka ugu fiican lagu dhawaaqi doono waxaana la shaaciyay in maanta oo talaado ah , November 14 lagu dhawaaqi doono liiskan marka ay saacada London tahay 12:00 GMT waana waqti ku beegan 3:00 galabnimo ee saacada Geeska Afrika.
Waa Kuwee Xidigaha Goolasha Ugu Badan Soo Dhaliyay Sanadkan 2017 Ee La Filayo In Ay Meel Fiican Ka Gali Doonaan Qiimaynta Goal 50:
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ciyaartoyda lagu qiimeeyo waxaa ka mid ah goolasha ay soo dhaliyaan iyo waliba bandhiga ay garoonka ku dhex sameeyaan, waxayna shabakada Goa.com sii shaacisay liiska ciyaartoyda sanadkan 2017 goolasha ugu badan soo dhaliyay ee laga yaabo in qaar badan oo ka mid ahi ay ku jiri karaan liiska 50 ka ciyaartoy ee aduunka ugu fiican.
Laakiin waxaaba la filayaa in xidiga ku guulaysan doona abaal marinta Goal 50-2017 uu qayb ka yahay liiskan maadaama oo la fahansan yahay in Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi uu midkood markale hanan karo abaal marintan. Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa rekoodh isku mid ah abaal marintan ku wadaaga waxayna haystaan min afar jeer oo ay soo hanteen abaal marinta Goal 50 Prize.
Lionel Messi ayaa ah xidiga sanadkan 2017 goolasha ugu badan soo dhaliyay wuxuuna xidiga ree Argentina uu ilaa hadda magiciisa ku soo qoray 51 gool oo uu ku soo dhaliyay 56 kulan waxaana kaalinta labaad ku jira Roberto Lewandowski kaas oo 46 kulan ku soo dhaliyay 47 gool.
Harry Kane oo sanadkan la filayo in uu kaalin fiican ka heli doono qiimaynta Goal50 kadib markii uu sanadkii hore kaalinta 35 aad galay ayaa ilaa hadda sanadkan soo dhaliyay 45 gool kadib markii uu soo ciyaaray 42 kulan waxaana kaalinta afraad ku jira Cristiano Ronaldo oo 45 gool ku soo dhaliyay 51 kulan.
Inkasta oo Ronaldo iyo Harry Kane ay min 45 gool soo dhaliyeen haddana Kane ayaa kaalinta saddexaad ee gool dhalinta sanadkan ku galay in uu 42 kulan goolashan ku soo dhaliyay halka Ronaldo ay ku qaadatay 51 kulan. Laakiin Ronaldo ayaa haddana ah xidiga ugu cad cad ee abaal marintan markii shanaad ku guulaysan kara maadaama oo uu Real Madrid ka soo caawiyay Champions Leaque iyo La Liga isla markaana uu bandhig wayn sameeyay kulamo waa wayn.
Haddaba halkan kaga bogo liiska ciyaartoyda sanadkan 2017 goolasha ugu badan soo dhaliyay iyada oo aad arki karto xidig kastaaba kulamadii uu soo ciyaaray iyo goolasha uu ku soo dhaliyay laakiin liiskani ma aha liiska qiimaynta Goal50 uu ku salaysan yahay maadaama oo ay qiimaynta ku jiraan heer kasta oo ciyaartoyda ka mid ah sida difaacyada, khadka dhexe iyo kuwa la midka ah.
Cristiano Ronaldo ayaa ah xidiga difaacanaya abaal marintan kaas oo sanadkii 2016 kii ku soo guulaystay waxayna ahayd markii ugu horaysay ee Lionel Messi uu kaalinta saddexaad ka galay abaal marintan iyada oo Luis Suarez oo xili sanadkii 2016 kii wacdaro soo dhigay uu kaalinta labaad ku dhamaystay.
Lionel Messi ayaa abaal marinta Goal 50 ku soo guulaystay sanadihii 2009,2011, 2013 iyo 2015 kii halka Cristiano Ronaldo uu isna abaal marintan soo hantay sanadihii 2008, 2012, 2014 iyo 2016 halka Wesley Sneijder uu ilaa hadda yahay xidig aan Messi ama Ronaldo ahayn ee abaal marintan hal mar ku soo guulaystay.
Sanadkii: 2017- Abaal Marinta Goal 50 Waxaa Ku guulaysan doona?
Xidigaha Sanadkan 2017 Ku Fashilmay In Ay Qayb Ka Noqdaan Liiska Barri La Shaacin Doono Ee Xidiga Aduunka Ugu Fiican:
Waxaa jiri doona shan ciyaartoy oo hore liiska abaal marinta Goal50 kaalmo fiican uga soo gali jiray laakiin sanadkan la sii sheegay in ayna ku jirin isla markaana uu qaab ciyaareedkoodii ka saaray liiskii laga soo dhex xulanayay 50 ka ciyaartoy ee aduunka ugu fiican waxayna kala yihiin Gareth Bale, Mesut Ozil, Sergio Aguero, Gerard Pique iyo waliba Riyad Mahrez.
Sidaa daraadeed, kaalmihii ay sanadkii hore ama sanadihii la soo dhaafay ay xidigahani ku jireen waxaa hubaal ah in ay wajiyo cusubi soo gali doonaan. Tobanka kaalmood ee ugu sareeya liiska 50 ka ciyaartoy ee aduunka ugu fiican sanadkan 2017 ayaa ah kuwa sida wayn isha loogu hayn doono marka laga yimaado xidiga abaal marintan ku guulaysan doona.
Waxaana lays waydiinayaa haddii Ronaldo ama Messi ay markoodii shanaad ku guulaysan doonaan iyo haddii uu ciyaartoy kale markii ugu horaysay abaal marintan ku guulaysan doono tan iyo sanadkii 2010 kii markaas oo Wesley Sneijder uu noqday xidigii ugu horeeyay uguna danbeeyay ee aan Messi iyo Ronaldo ahayn ee abaal marintan ku guulaystay.